Apple inogadzirira kugadzirisa kweiyo iPad uye Mac makomputa | IPhone nhau
Mark Gurman atangazve mari yake yenguva dzose pazvirongwa zveApple zvemberi, uye izvozvi zvasvika paMac range uye nePad Pro.Zvinoenderana nemupepeti weBloomberg, Apple ingadai yakagadzirira kuvandudzwa kweiyo iPad kuti itarise zvakanyanya pabizinesi, se pamwe nekugadziriswazve kweMac makomputa, ese ari maviri desktops uye malaptop, anogara achidudza masosi padyo kwazvo nenyaya yacho. Iyo yekuvandudza iyo iPad ichauya iri muchimiro chehardware uye software, uye iyo Mac renji yaizovandudzwa neshanduro nyowani dzeMac, MacBook Pro uye MacBook Air, uye 5K yekutarisa kuti aizova anotsiva maCinema Displays achangobva kutsakatika uye kuti ichagadzirwa nekubatana ne LG Electronics.
1 Zvitsva zveiyo Pro Pro
2 Kugadziridzwa kune Mac renji
3 Kubatana ne LG
4 Nyamavhuvhu 7 ndiko kugadzwa
Zvitsva zveiyo Pro Pro
Apple yaizovhura nyowani software maficha mukati meiyo iOS 10, yakanyatsogadzirirwa iyo iPad Pro, mukati mehafu yekutanga ya2017, kunyangwe zvisina kurambidzwa kuti zvinopedzisa kuvachengeta kuti vatange pamwe neiyo nyowani iOS 11 iyo yainoburitsa kumagumo yegore. Uku kuvandudzwa kunosanganisira mashandisiro matsva eApple Penzura, senge kugona kududzira muhurongwa hwese, senge Mail, Safari uye iMessage., nenzira yakafanana chaizvo kune izvo zvinogona kutomboitwa neGlass Note uye Stylus yayo. Parizvino Apple Penzura inogona chete kushandiswa nemaapplication akanyatsogadzirirwa kuti aenderane nayo.
Iko shanduko yemadhigirii ichasanganisira tekinoroji nyowani yekukasira iyo ichabvumidza kuburitsa zoom, pamwe nekupuruzira iyo skrini. Shanduko idzi hadzi svike kusvika 2017, apo Apple inoburitsa itsva 10,5-inch iPad Pro, yaive yatove nerunyerekupe mavhiki apfuura.
Kugadziridzwa kune Mac renji
Kana zvidzoreso zvine chekuita neiyo iPad zvikasasvika kusvika 2017, zvinoita sekunge nhau dzemakomputa eApple dzichasvika munguva pfupi, risati rapera gore. Kuvhurwa kwemakomputa matsva aya kuchaitika mukati memwedzi waGumiguru. Zvidzoreso zvinosanganisira nyowani MacBook Mhepo ine USB-C zviteshi, uye iMac nyowani ine AMD mifananidzo. Asi hutsva hunonyanya kukosha hwaizouya neMacBook Pro iyo yaizosanganisira bhawa, inonzi naApple se "Dynamic operating bar" (zita racho rinosiyana), inozove skrini yeOLED iyo ingatipe mabhatani akasiyana zvichienderana nharaunda yatakabata. Ichi hachisi chinhu chitsva, uye isu tanga tichitaura kwemwedzi pamusoro pechinhu ichi chitsva chaitarisirwa kuna Keynote munaJune asi zvinoita sekusvika munaGunyana.
Kubatana ne LG
Pamusoro pekuvandudzwa kweMacs, Apple yaizovhura skrini nyowani ye5K yekushandisa nemakomputa avo, uye izvo zvaizogadzirwa neLG. Ichi skrini chingave icho chingabudirire chinopera Cinema Ratidza kana Thunderbolt Ratidza, iyo Apple nguva pfupi yadarika, iyo yakatanga runyerekupe nezve mhando nyowani munguva pfupi. Hapana chinotaurwa pamusoro pezvakataurwa panguva iyo injini idzi dzaigona kusanganisa iwo magirafu kubatsira kuita mamwe mabasa anodikanwa nemakomputa asina simba.
Nyamavhuvhu 7 ndiko kugadzwa
Kuti tione kana aya makuhwa achiitika, zvirinani izvo zvinofanirwa kusvika muhafu yepiri yegore, isu tichafanirwa kumirira vhiki chete, kubvira Musi waGunyana 7 Apple yakatosimbisa kuti kuchave neKeynote yekuburitsa iyo iPhone 7 uye idzi dzese nhau dzatakurukura. Ehezve, isu takamirira imi mose zuva iro kuti muenderere mberi chiitiko pamwe nesu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPad » Apple inogadzirira kugadzirisa kwemakomputa ePad uye Mac
hapana chinhu kubva kumac pro
Fitbit inosuma iyo nyowani Charge 2 uye Flex 2